U-Anilist Ulandela Umholi WakwaReddit Futhi Wenqabela Igama elithi 'UGIBE' - Okunye
U-Anilist Nguye Olandelayo Emgqeni Wokuvimbela Igama elithi 'UGIBE' NjengeReddit
U-2020 ube ngomunye weminyaka ehlanya kakhulu ngekhulu lama-21. ICoronavirus kubonakala sengathi ayimisi noma ibuphi ubuhlanya ekudlaleni futhi.
Ngokuhamba kufana neReddit kulo nyaka, Anilist, i-database ye-anime efana ne-MAL yokulandela i-anime ne-manga, inquma ukuvimbela igama elithi 'UGIBE'.
Noma ngubani okhetha ukusebenzisa igama UGIBE , igama elidlalwayo elisetshenziselwa ukuchaza abalingiswa be-anime abaphenduka ubulili obuhlukile, I-Anilist unikeze inkulumo yokuthi kungani kungafanele.
Ingasaphathwa imiphumela yokubhala “isicupho” ezinkundleni zabo.
I-Anilist soft ivimbe isicupho segama, uma usebenzisa lelo gama ukuchaza umlingiswa bazokuthumelela udonga lombhalo bachaze ukuthi kungani kuyigama elibi https://t.co/DSOqbT9hxu pic.twitter.com/vV4b9zDDXz
- Shizu (@BepDelta) Okthoba 25, 2020
Umlayezo uqala ngo:
“Ukwenza umphakathi wethu ubandakanye abantu abangaguquki nabangashintshi ubulili, sizobe sikukhubaza ukusetshenziswa“ kogibe ”lapho kubhekiswa kubalingiswa noma kubantu. Esikhundleni salokho, siphakamisa ukuthi ufunde ngaphezulu kweminye imigomo ephakanyisiwe engezansi.
Ngomzamo wokufundisa umphakathi ngamagama afanelekile, ngeke sikhiphe izexwayiso noma izijeziso ezisemthethweni kuze kube kukhona amacala okuphindaphinda ngamabomu. '
Okuthunyelwe kwenkundla ka-Anilist kuqhubeka kuthi:
'Ukucacisa ngokuphelele ukuthi sizoqinisa kanjani ukusetshenziswa kwegama' isicupho 'ku-AniList kusuka lapha kuye phambili:
Njengoba bekulokhu kunjalo, ukusetshenziswa kwegama elihloselwe ukuhlukumeza abantu akuvunyelwe nganoma iyiphi indlela esizeni. Ukusetshenziswa okunjalo kuhlangatshezwe / futhi kuzoqhubeka ukuhlangatshezwa ngezexwayiso / ukuvinjelwa komengameli ngokuya ngesimo sesimo.
Lapho silinganisa ama-slurs asetshenziswa ku-AniList, inqubo yethu ukukhipha islur / comment bese uthumela umsebenzisi umyalezo ngesexwayiso esisemthethweni noma ukuvinjelwa kuye ngomongo wokusetshenziswa nomlando womsebenzisi. Inqubomgomo yethu yokusetshenziswa okungajwayelekile kwegama elithi 'isicupho' ukubhekisa kubalingiswa ngeke isuse leli gama ekuqaleni. Esikhundleni salokho, sizoshiya impendulo echaza umlando wegama kanye nesimo sethu kuso. Lokhu kwenziwa ngemizamo yokufundisa umphakathi kunokujezisa abantu abangawazi umthelela waleli gama. Ezikhumbuzweni eziphindaphindwayo zesimo sethu, lokhu kungadlulela ezixwayisweni ezisemthethweni noma imikhawulo kwikhono lomsebenzisi lokuthumela kusayithi.
Okuhlukile kulokhu uma umuntu ezibiza ngobuqotho 'njengoxhaka', njengoba kungejwayelekile kumuntu ukwenza emphakathini we-LGBTQ +. Ukusebenzisa igama ukuzikhomba kuzovunyelwa futhi ngeke kubhekiswe kulokhu okungenhla. Lesi akusona isabelo somsebenzisi sokusebenzisa leli gama kubalingiswa noma kwabanye abasebenzisi esizeni; lokhu kumane nje kuyisibonelelo sokuthi bazikhombe ngobuqotho entweni efana ne-About Me yabo. ”
Ukuthatha iqabunga encwadini kaReddit
Phambilini ngo-2020 uReddit wenze into efanayo.
Okuxakayo - emazwaneni, abaHlengi abaningi banikeze izimpikiswano ezizwakalayo eziphikisana nokuvinjelwa okuyimpikiswano kwegama elithi 'isicupho'.
Ngisho umuntu odlulayo wadideka ngakho
Abalandeli be-anime bazosabela kanjani phakathi kwamanje futhi ake sithi, amahora angama-48 alandelayo ku-Anilist ukuqagela kwanoma ngubani.
Ucabangani ngale nkambiso encane kodwa ekhulayo yokuthi 'UGIBE' uvinjelwe?
Ingabe kwenziwa ngezinhloso zangempela?
Umthombo wezindaba: https://anilist.co/forum/thread/18498
Izingxabano Ezizayo Zama-Anime Ngo-2021 Ezizodiliza I-Intanethi
Isiko Lama-Anime Khansela Liyafa Kancane Kodwa Ngokuqinisekile
ucezu lwempilo anime ku-hulu